ငွေကြေးဝေါဟာရဆိုင်ရာ သုတသင်ခန်းစာ - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on April 3, 2014 at 11:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
"ဒေါ်လာ" သည် US ၊ Australia ၊ Canada ၊ Fiji ၊ New Zealand နှင့် Singapore အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် အများသုံး ငွေကြေး ဖြစ်ပါသည်။ Dollar (သို့) Slovenian tolar ရဲ့ ဇစ်မြစ်ကတော့ "Joachimsthaler" လို့ ခေါ်တဲ့ အကြွေစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုကောက်ကတော့ Theler ဖြစ်ပြီး ရှေး Flemmish နဲ့ German (အနိမ့်ပိုင်း) တို့ကတော့ daler လို့ခေါ် ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကို Joachim Valley လို့ခေါ်တဲ့ နယ်မြေကို အစွဲပြုပြီး ခေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနယ်မြေဟာ အကြွေအစေ့ကို လုပ်တဲ့ ငွေသတ္တုကို တူးဖေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခေါ်အဝေါ်ကို တခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်း သုံးစွဲလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Dutch လူမျိုးတွေပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ အမေရိကန် လက်အောက်ခံနိုင်ငံတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုတဲ့ အကြွေစေ့ကို ဒီနာမည်ခေါ်လာကြပါတယ်။ ၁၇၉၂ မှာတော့ အမေရိကန် ငွေရေး ကြေးရေး စံနှုန်း (monetary unit) အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
All that glitters is not gold. (ပြောင်ပြောင်မြင်တိုင်း ရွှေမဟုတ်ပါ။)
Dinar ကို နိုင်ငံအမြောက်အများမှ သုံးပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ ဇစ်မြစ်ကတော့ လက်တင်ဘာသာသစကားနဲ့ denarius လို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးဟောင်းရောမ အကြွေစေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ dinar ကို အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံအချို့ကို ဖေါ်ပြရမယ်ဆိုရင် Jordan, Algeria, Serbia, Kuwait တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ India နဲ့ Paskistan မှာအသုံးပြုတဲ့ ရူပီ (rupee) ကတော့ သက္ကတ ဘာသာရဲ့ rupya ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဆင်းသက်လာတာပါ။ ၎င်းဟာ Indonesia ရဲ့ rupiah ရဲ့ ဇစ်မြစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ "ပုံဖေါ်ထားသောငွေ" (wrought silver) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာတော့ rand ကို သုံးပါတယ်။ ၎င်းကို Johannesburg မြို့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ငွေသိုက်တွေကြောင့် လူသိများတဲ့ Witwatersrand ဆိုတဲ့ နယ်မြေကို အစွဲပြုပြီး ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလန် (Poland) နိုင်ငံကတော့ (zloty) ကို ငွေကြေးအဖြစ် သုံးပါတယ်။ Polish လို ရွှေသားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Hungary နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး ကတော့ Forint ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ fiorino ဆိုတဲ့ အီတလီစကားက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiorino ကတော့ Italy နိုင်ငံ၊ Florence မြို့ရဲ့ ပန်းပုံတံဆိပ်နှိပ်ထားတဲ့ ရွှေအကြွေစေ့ရဲ့ မူလနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အထိ အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှအကြွေစေ့ florin ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြွေစေ့တွေကို ရွှေငွေအစရှိတဲ့ အဖိုးတန်သတ္တုတွေနဲ့ ပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ လွှပုံသဏ္ဍာန် အနားစောင်းတွေဟာ ရေပန်းစားလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖိုးတန်သတ္တုတွေကို ခြစ်ယူပြီး အကြွေစေ့တန်ဖိုးကို လျော့ချဖို့ခက်ခဲစေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားရဲ့ ငွေကြေး ringgit ကတော့ "မညီမညာ"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ မလေး စကား Jagged လာပါတယ်။ ၎င်းကတော့ ringgit မသုံးမီ မလေးရှားရဲ့ ငွေကြေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စပိန်ငွေဒေါ်လာတွေရဲ့ မညီညာတဲ့ အစွန်းတွေကို ရည်ညွန်းပါတယ်။
Doing the rounds. (ပျံ့ နှံ့သွားခြင်း)
တရုတ်ရဲ့ Yuan (ယွမ်ငွေ)၊ ဂျပန်ရဲ့ Yen (ယန်းငွေ)၊ ကိုရီးယားရဲ့ (Won) အားလုံးတို့ရဲ့ ဇစ်မြစ်သည် "၀ိုင်းသော" (သို့)" အကြွေစေ့ အ၀ိုင်း"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ တရုတ်စာလုံး (Chinese character) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ၊ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာသစ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တရုတ်လိုတော့ ၎င်းတို့ကိုလည်း ယွမ်လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာကိုလည်း တရုတ်လို ယွမ်လို့ပဲ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် US dollar (meiyuan) ဟာလည်း တရုတ်လိုဆို အမေရိကန်ယွမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Royal crown (တော်ဝင်သရဖူ)
Scandinavian နိုင်ငံအများစုအသုံးပြုတဲ့ ငွေကြေးနာမည်ကတော့ သရဖူလို အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လက်တင်စကား Corona က ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Swedan မှာတော့ Krona ၊ Norway ကျတော့ Krone ၊ Denmark မှာတော့ Krone ၊ Iceland ကျတော့ Krona ၊ Czechoslovakia ရဲ့ koruna စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြပါတယ်။ Estonnian krone ကတော့ အခုအခါမှ ယူရိုနဲ့ အစားထိုးထားပြီး Spain ရဲ့ ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ real ကတော့ "တော်ဝင်"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လက်တင် စကား regalis ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Spain ရဲ့ ယခင်က ငွေကြေးဖြစ်ခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းပြည်အများစုရဲ့ ငွေကြေးတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် Omani နဲ့ Iranian တို့ရဲ့ rial နှင့် Qatari ၊ Saudi နဲ့ Yemeni တို့ရဲ့ riyal တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှ Germans တွေနဲ့ Finns တွေဟာ Euro ကို ငွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပေမယ့် အရင်ကငွေကြေးဖြစ်တဲ့ German mark နဲ့ Finnish markka တို့ရဲ့ ဇစ်မြစ်ဟာ အလေးချိန်ရဲ့ အခြေခံအတိုင်းအတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် "အလေးချိန်" ဖြစ်တဲ့ Spain နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး Peso ကိုတော့ အခုအခါမှာ အသုံးမပြုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၎င်း Peso ကို Mexico ၊ Argentina ၊ the Phillippines ၊ Chile ၊ Uruguay ၊ the Dominican Republic ၊ Cuba နဲ့ Columbia နိုင်ငံတွေရဲ့ ငွေကြေးအဖြစ် ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါတယ်။ Belarus မှာပါ အသုံးပြုတဲ့ ရုရှားငွေကြေး ruble ကတော့ ငွေသတ္တုရဲ့ အလေးချိန်အတိုင်းအတာက ပေါက်ဖွားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှတွေရဲ့ ငွေကြေး Pound (သို့) Sterling pound ကတော့ "အလေးချိန်" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လက်တင်စကား pondus က လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ sterling ဟာ "ကြယ်ကလေး" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အလယ်ခေတ် အင်္ဂလိပ်စကားက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှေး Norman လူမျိုးတွေရဲ့ အကြွေစေ့တွေမှာ ကြယ်ပုံပါ လို့ပါပဲ။ Italian နဲ့ Turkish ငွေကြေး lira ဟာလည်း "ပေါင် (pound)" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လက်တင်စကား Libra က ဆင်းသက်လာပါတယ်။ ၎င်းဟာလည်း အလေးချိန်ရဲ့ စံနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
blog.oxforddictionaries.com မှ Ashley Wagner ၏ Origins of currencies : from jagged edges to flowers ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။